गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पति बीमाको माध्यमबाट शुद्धिकरण रोक्न तालिम — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बीमा > गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पति बीमाको माध्यमबाट शुद्धिकरण रोक्न तालिम
गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पति बीमाको माध्यमबाट शुद्धिकरण रोक्न तालिम
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले सातै प्रदेशमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी तालिम प्रदान सुरु गरेको छ । इन्स्योरेन्सेले गत शुक्रबार कोहलपुरमा तालिम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा अपराधिक क्रियाकलाप र गैरकानुनी काम गरी आर्जन गरेको रकम बैँक र बीमाको माध्यमले शुद्धिकरण गर्ने गरिएको चर्चा भएको छ । यस्तो कार्यलाई निरूत्साहित र निवारण गर्न कर्मचारीहरूलाई यस सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था, शुद्धिकरणका प्रयास, रिपोर्टिङको तरिका र निवारणका प्रकृया बारेमा कम्पनीले तालिम प्रदान गरेको हो । कम्पनीका बरिष्ट सहायक महाप्रबन्धक सपना खरेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी उक्त तालिम प्रदान गर्नु भएको थियो।
तालिममा कार्यालय प्रमुखहरूलाई नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल पन्थीले बीमाका प्रोडक्टहरू बारेमा र मार्केटिङ्ग प्रमुख प्रशान्तराज धमलाले बजार व्यवस्थापनका तरिकाहरू बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ । तालिम कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश, सुदुर पश्चिम प्रदेश र साविक राप्ति अञ्चल अन्तर्गतका २२ जना प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो ।
२०७७ चैत्र ९ गते ११:४९ मा प्रकाशित
आठ महिनामा श्रम मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १९ % मात्रै, कयौं काम सुरु नै भएनन् !
ह्वात्तै बढ्यो सुनको भाउ, प्रतितोला कति पुग्यो ?
सरकारले लकडाउनको समयलाई सार्वजनिक बिदासरह मान्ने, काम नभए पनि तलब (सूचनासहित)
नेपाललाई फेरी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी !